देशलाई खतरा अब कहाँबाट छ ? सनसनीपूर्ण विश्लेषण : घनश्याम भुसाल
| Oct-28,2015 04:28:00 Published
आजको बिषय , ‘नयाँ संविधान र नेपालका भावी दिशा’ मलाई लाग्छ, आजको दिनमा नेपालमा हुनुपर्ने बौद्धिक छलफलको सबैभन्दा राम्रो बिषय यही हो । यसको सिद्धान्त के हो रु अब यसका भावी कार्यक्रम के हुनेछन् रु त्यसका चुनौती के हुन् रु यी यी बिषय अनिवार्य हुन् । यस बिषयमा म एकदमै सक्षिप्त रुपमा कुरा राख्छुु ।
मधेसमा आन्दोलन चर्किरहेको बेला मैले टिभी हेरीरहेको थिएँ । मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा एकजना आन्दोलनकारीसँग पत्रकारले अन्र्तवार्ता लिदैं थिए । अधवैशे उमेरका देखिने त्यो आन्दोलनकारी भद्र, पढेलेखेको जस्तो देखिन्थे । पत्रकारले उनलाई सोधे, तपाईहरु किन आन्दोलनमा आइरहनुु भएको छ रु तपाईको ऐजेण्डा के हो रु उसको जवाफ थियो, ‘यो संविधानमा मधेसीलाई केही पनि अधिकार छैन ।
अधिकारको कुरा त परै जाओस्, बोल्ने अधिकार समेत दिइएको छैन ।’ मधेस आन्दोलनमा अघि–अघि हिडेको मान्छेले भन्दैछ, ‘मधेसीलाई बोल्नेसम्म अधिकार छैन ।’ अब भन्नुहोस् मुलुक कता जादैछ ? आन्दोलनको अगाडि अगाडि हिडेकाहरुले मधेसीलाई बोल्ने सम्मको अधिकार छैन संविधानमा भनेर मान्छे बटुल्दैछन् भने हामीले हेर्नुपर्छ मुलुक कसरी मिसलिड हुँदैछ ।
एउटा मधेसी समुदायका मानिस भन्दैछन्, की मधेसीलाई बोल्नेसम्म अधिकार संविधानमा छैन । उसका अगुवाले उसलाई के सूचना दिदैँछन् ?
मधेसमा कस्तो सन्देश र सूचना जादैछ रु यो सामान्य कुरा होइन, यो भयंकर कुरा हो ।
यो तिनको मात्रै कुरा पनि होइन, हाम्रो पनि कुरा हो । हामीले कस्तो समाज बनायौँ रु कस्तो राज्य बनायौँ ? हामीले कस्तो राजनीतिक दल र संयन्त्र बनायौं रु कस्ता अभ्यास गर्यौँ रु कि एउटा मधेस आन्दोलन उत्रिएका सडकका मान्छे आज भन्दैछ, मधेसीलाई बोल्नेसम्म अधिकार छैन । होला ती मान्छेका अध्यानमा खोट ।
उसको अज्ञानताको कुरा त होला । तर, हामी यसबाट अछुतो रहन सक्छौँ या सक्दैनौँ ? हामीले सोच्नुुपर्ने कुरा हो ।
दोस्रो, हामीले संविधान जारी हुुदैंँ गर्दा दिपवाली गर्यौँ । तर, दिपवाली कतिबेला गर्यौँ भने जतिबेला यो संविधानप्रति ‘इन्डिया’ले राम्रो धारणा राखेको छैन है भन्ने थाहा पायौँ । जब यो संविधानप्रति ‘इन्डिया’को धारणा राम्रो छैन भन्ने कुरा अरुले बताइदिएपछि मात्रै बत्ती बाल्यौँ, चिया खुुवायौँ ।
अरुले बताइदिएपछि मात्रै हामीले स्वागत गर्यौँ । यो सुन्दा नकरात्मक जस्तो लाग्छ, तर भयो यही । संविधान महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नेपालमा कम्युनिष्टले खासगरी हिजोका कम्युनिष्टले भन्ने गरेको नयाँ जनवादी व्यावस्था, नयाँ जनवादी क्रान्ती पछि हामीले त्यसलाई बुझाउँदा जनताको बहुदलीय जनवादी भन्यौँ । जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्तिको संवैधानिक व्यावस्था हो यो संविधान हो । कम्युनिष्टहरुले भन्ने गरेको जनवादी, नयाँ जनवादी, बहुदलीय जनवादी कांग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक क्रान्ती यी सबैको संवैधानिक व्यवस्था हो । यो समान्तवादका विरुद्धको लोकतान्त्रिक क्रान्तिको सवैधानिक घोषणा हो ।
मैले क्रान्तिको घोषणा भनिरहेको छैन, संवैधानिक घोषणा भन्दैछु ।
यो सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो घोषणा ४ जेठमा संसदको घोषणा थियो । जसले राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरेको छ । राजतन्त्रको हो राजसंस्थाको होइन । संविधानको त्यसपछिको व्यवस्थामा राजसंस्था मात्रै बाँकी थियो, राजतन्त्र थिएन ।
राजतन्त्रका सबै खालका शासन पद्धति उखेलिएको थियो । त्यो भयंकर ठूलो कुरा थियो ।
तर, हामीले ढुंगा हान्दा हान्दै, पुुलिससँग लड्दा लड्दैँ, केही साथी गुमाउँदा गुमाउँदै आइसकेको हुनाले त्यसलाई हामीले त्यतिठूलो सम्झेनौँ । त्यो ठूलो उपलब्धी थियो । तर, किन हामीले ठूलो सम्झेनौँ ? यसको मतलब हो, राजनीतिक रुपमा जति हामीले ठूलो उपलब्धी हासिल गर्दैछौँ, वैचारिक रुपमा ठूलो समस्या देखा पर्दैछ । यो विषयमा हामी सचेत रहनुुपर्छ । गहिराइमा छलफल हुनुपर्छ ।
वास्तवमा माओवादीले भनेको पुरानो संसदले राजतन्त्र सिध्याइदियो ।
तर, हामीले यो कुरा बुझेनौँ । माओवादीले जे भने त्यतैतिर गयौँ । हाम्रो छलफल र विर्मश त्यतैतिर गयो । घोषणापछि नै हामीले गणतन्त्रको अभ्यास गर्यौँ । राष्ट्रपति बनायौँ, उपराष्ट्रपति बनायौँ । तर, क्रान्तिको सालनाल बाँकी थियो ।
खासगरी संघीयताको सालनाल यति बलियो थियो, की त्यसलाई काट्नुुपर्ने थियो । त्यो निकै बलियो थियो । सो संविधान जारी गर्र्दा हामीले त्यो सालनाल काटेका छौँ । यस अर्थमा अब नेपालमा असाध्यै महत्वपूर्ण काम गरेका छौँ । त्यो भनेको प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक, नयाँ जनवादी, जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ । यो यही तहमा बुझ्यौँ भने राम्रो हुन्छ । यही गहिराइका साथ हामीले यसलाई बुुझेनौँ भने फेरि यसलाई बचाउन पनि सकिन्दैन ।
मुख्यत यसले २ काम गर्छ ।
पहिलो कुरा आर्थिक आधारबाट कुरा गर्दा यसले सामान्ती उत्पादन स्वामित्वलाई सकिदिन्छ । जुन अस्तीको क्रान्तिभन्दा अघि नै सकिसकेको थियो । संरचनाको कुरा गर्दा यसले गणतन्त्र ल्याउँछ, राजतन्त्र हिडाइदिन्छ ।
यो २ वटै काम हामीले २०६२-६३ सम्पन्न गरेका छौँ । २०४७ सालको संविधानमा मुलत २ सामन्ती प्रावधान थिए ।
पहिलो राजाको सम्पतीको ‘सिलिङ’ नहुने कुरा सामन्ती थियो, दोस्रो राजाको सम्पतीमा ‘ट्याक्स’ नलाग्ने कुरा सामन्ती थियो । त्यस बाहेक सबै धारा जनताका धारा थिए, हाम्रा धारा थिए, हामीले आर्जेका धारा थिए । सामान्यतः त्यो जनवादी संविधान थियो । तर, हामीले वास्ता गरेनौँ । हामीले बुझ्न सकेनौँ, बुझाउन सकेनौँ ।
माओवादीले जे भने त्यही हुने भयो । यो खतरा आज पनि छ । आज पनि मैले यो किन भन्दैछु, भने फेरि पनि नयाँ संविधानलाई बुझ्न सकेनौँ भने हामीले यसलाई बचाउन सकेनौँ । नबुझेको जनताले क्रान्तिको उपलब्धीलाई बचाउन सक्दैन ।
यो यहाँको मात्रै कुरा होइन, संसारमा पनि त्यस्तै भएको छ । फ्रान्समा क्रान्ति हुन एक सय बर्ष लाग्यो । ५ वटा क्रान्ति भए । त्यो फ्रान्सले एक बर्ष लड्नुपर्यो । यदि आज यो महत्वलाई बुझ्न सकेनौँ भने त्यो खतरा छ ।
को बाट खतरा छ ?
अब नयाँ संविधानको खतरा के हो ? हामी कुन खतरामा छौं रु हाम्रो समाज, अर्थतन्त्र, हाम्रो राज्य सबैलाइै एकै ठाँउमा राखेर हेर्ने हो भने यो संविधानले आफ्नो दीर्घायुको कामना गरिसकेको छैन ।
यस अर्थमा छैन की, हाम्रो समाजको उत्पादन शक्तिको बाटो पाएको छैन ।
जहाँ श्रमशक्तिले बाटो पाउदैन त्यो ठाउँमा राजतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता केही पनि बाँकी राख्दैन । त्यसले भत्काइदिन्छ । यो संघीय गणतन्त्र नेपाल माथि कुनै चुनौती छ भने त्यही लाखौँ युवाको श्रमशक्ति नै हो ।
त्यो श्रमशक्त्ती मैले घरी घरी सैतान शक्त्ती पनि भन्ने गरेको छ । यो श्रम शक्तिलाई बाटो दिइयो कम्तीमा पनि २५ बर्षमा नेपाललाई इन्डिया भन्दा धेरै राम्रो बनाउँछ । त्यो श्रमशक्तिलाई काम दिनुुभयो भने देश बन्छ र बनाउछ ।
क्रान्तिका जतिसुकै कुरा गरौँ, राजनीतिका जतिसुकै कुरा गरौँ, त्यो श्रमशक्ति काम बाटो दिएनौँ भने आफै प्रतिक्रान्ति हुन्छ । हरेक क्रान्तिले आफ्नो कात्रो आफै बोकेर आउँछ । क्रान्तिले केवल सुत्ने बिछ्यौंना मात्रै बोकेर आउँदैँन । यो क्रान्तिको कात्रो यही हो । यतातिर ध्यान दिइएन भने क्रान्तिको उपलब्धी बचाउन सकिन्दैन ।
मुलुकमा पूँजीपती नभइएका होइनन् ।
विनोद चौधरी अन्तराष्ट्रिय पूँजीपति छन् । उसको ‘फोर्स’ पत्रिकाले उनको नामै निकालेको हो । यस्ता नामै निकाल्ने धेरै पूँजीपति छन् । तर, यस्तो पूँजी भएन, यस्ता पूँजीपतिहरु भएनन्, जसले हाम्रा सान्तानहरुलाई काम दिएन । जापनबाट साडी ल्याउने, जापनबाटै गाडी ल्याउने पूँजी भयो । जापनबाटै गाडी र साडी ल्याउनेले हाम्रा जवनाहरुलाई काम दिएन । जो देशमा आजस्रशक्ति छ, उसले काम पाएन ।
आजका क्रान्तिकारीले बुझ्नै पर्ने कुरा, सर्वथा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने काम दिने पूँजी विकास गर्न सकिएन भने सबै भत्काइदिन्छन् । हामी सबै लाग्ने त्यतातिर हो । मधेस आन्दोलन र भारत अब कतिखेर आउछ ‘इन्डिया’ रु हो, यहीबेला आउँछ हामीकहाँ ‘इन्डिया’ ।
नेपाललाई स्थायीत्वको साथ बाच्न नदिने कुरामा भारतीय सत्ता एकदमै प्रतिबद्ध छ ।
कहिले हामी जिस्केर भन्छौँ, महाकाली कर्णाली बुझाएपछि त भारत चुपो लाग्ला । हामीले सबैभन्दा राम्रा परियोजना अपर कर्णाली, अरुण तेश्रो सबै भारतलाई बुझायौँ । तर, यतिले भारत मान्नेवाला छैन ।
यसको अरु नै उद्देश्य छ ।
उसका उद्देश्य के छ रु हाम्रा बजारमा उसको उद्देश्य बिकिरहेको छ । ‘र’ का प्रमुख र एजेन्टेले लेखेका कुरा हाम्रो बजारमा खपत भइरहेका छन् । उनीहरुको ‘डकुमेन्ट’ बिकिरहेको छ । उनीहरुले लेखेको कुरा बजारमा बिकिरहेका छन् । भारतले नेपालको तराईलाई छुुट्याउ चहान्छ वा भारतले तराईलाई हाम्रो नियन्त्रणबाट कमजोर पार्न चहान्छ भन्ने कुरामा राजनीतिज्ञमा जहिलेसम्म भ्रम रहन्छ, तबसम्म हामी खतरामा रहन्छौँ ।
हाम्रा सांसदहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा भाषण गर्दा ताली पिटे । उनीहरुले मोदीको बुद्धि फिरेछ भनेर बहुतै ताली पिटे । तर, हाम्रा सांसदहरुले नबुुझी ताली पिटे । किनभने मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री थिए, एसियाको प्रधानमन्त्री थिएनन् । हामीले यस्तरी ताली पिट्यौँ मानौकी मोदी एसियाका प्रधानमन्त्री हुन्, नेपाललाई पनि अलिकति गरिदिने भए ।
‘र’ का चिफहरुले लेखेको ‘डकुमेन्ट’ले भन्छ, ‘की नेपाल करिब करिब सन् ६५ भित्र टुक्राइनेवाला थियो । तर, त्यहीबेलामा चीन र भारतबीच युद्ध भयो । जसले गर्दा टर्यो ।’ अर्का ‘र’ का ‘ऐजेन्ट’ लेख्छन्, ७५ पछि यो मुलुकलाई टुक्राइने अर्को योजना थियो, सिक्किम बनाउने योजना थियो । तर, दुुर्भाग्य इन्दिरा गान्धीले चुनाव हारिन् । त्यो अघि संकटकाल लाग्यो ।’ ‘र’ले त्यसो भनिरहेको छ, लेखिरहेको छ । अनि हामी किन बुझ्दैनौँ रु अहिले जे हुदैछ, यो तेश्रो र उनीहरुको अन्तिम प्रयत्न हो ।
आज जे हुँदैछ, हे भगवान म घनश्याम भुसाललाई गलत सावित गर । म त्यो कामनाका साथ भन्छु यो तेस्रो प्रयास र उनीहरुले गरेको अन्तिम प्रयास हो । नेपाललाई टुक्र्याउने यो भारतको अन्तिम प्रयास हो ।
हामीले बुझ्न पर्ने कुरा यहि हो ।
हामीले बन्दुक पड्काएर कुस्ती खेलेर सक्दैनौ यो कुरामा । यो कुरामा त्यो तहको कुटनीतिक त्यो तहको राजनीतिक र परिपक्वता र तदारुकता हरेक चिज हामीलाई चाहिन्छ । मान्छेहरुले भन्छन्, नेपाललाई नाकाबन्दी झनै गरेको रोकियो । अनि खुसी भयो ।
तर कुरा त्यतिमात्रै होइन हिजो साउथको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुलाई ‘ब्रिफिङ’ भएको छ, युएनमा भएका उनका ऐजेन्टहरुले लबिङ गर्दैछन् ।
अहिले धेरै ठुलो खड्यन्त्र, भइरहेको छ ।
आज हाम्रो नेतृत्व जसरी एक भएको छ, यो खुसीको कुरा हो । तर, यो एकतालाई टिकाइराख्न सकेनौँ भने हाम्रो लागि धेरै महँङ्गो हुनेछ । यो हाम्रो एकता २ दिनको लागि मात्रै भयो भने हामीले राष्ट्र बचाउन सक्दैनौँ । हाम्रो नेतृत्व एक हुनुपर्छ ।
फेरि यसो भन्दै गर्दा हामी उत्ताउलो हुनुहोस् भन्दैनौँ । ‘खोइ कहाँ छस् भारत यता आइज, म कुरा गर्छु’ भने जसरी भाषण गरेर हुुदैंँन । त्यसरी बोल्नुहोस् भनेर नेतृत्वलाई उक्साउनुु पनि हुदैन ।
यो ऐतिहासिक कालमा भारत र मधेस अलग–अलग हो, भारत र मधेसको मुद्दा अलग–अलग हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । भारत र मधेसको मुद्दालाई एकै ठाउँमा राख्ने र राख्न दिने यो खालको कमजोरी हामीबाट हुन हुुदैँन । त्यो हामीबाट भयो भने त्यो हाम्रो लागि धेरै महँङ्गो हुनेछ । एक लाइनमा भन्दा भारतको बिरोध गर्ने हो ? त्यो होइन हाम्रो दिशा भनेको राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने हो ।
राष्ट्रिय पूँजीको विकासको लागि स्थायित्व चाहिन्छ, त्यसको लागि कुनै पनि शक्त्तीसँग कहिल्यै पनि सम्झौता नगरी एक भएर अघि बढ्ने हो ।
(सहाना प्रधान प्रथम प्रथम स्मृति दिवसमा आयोजित ‘नयाँ संविधान र नेपालको भावि दिशा’ विषयक विचार गोष्ठीमा एमाले उपमहासचिव भुषालको प्रस्तुत विचारको सारसंक्षेपको पुनः प्रकाशन हो यो ।)